खोप वितरणको अवस्थामा परिवर्तन गर्न अर्जेन्टीनाको माग
अर्जेन्टीना, ब्युनस आर्यस । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप वितरणको अवस्थामा परिवर्तन गर्न अर्जेन्टीनाले माग गरेको छ ।
अर्जेन्टीनाका राष्ट्रपति अल्बेर्टो फेर्नान्डेजले विश्वभरी खोप वितरणको अवस्था सन्तुलित र न्यायोचित नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । “खोपको असमान वितरण भइरहेको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानु आवश्यक छ, अहिले जे जसरी भइरहेको छ, त्यो ठिक भइरहेको छैन,” उनले भने ।
कुल उत्पादित खोप मध्ये ९० प्रतिशत खोप उत्पादक देशहरुमा मात्रै प्रयोग हुनु र बाकी १० प्रतिशत मात्रै अन्य देशहरुलाई वितरण गर्नुले नै असमानता प्रष्टै देखिएको उनको भनाई छ ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको ब्युनस आर्यसको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले असमानताका विरुद्धमा सवैले आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । खोप उत्पादनको अनुपात र सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्याका बीचमा सन्तुलन ल्याउने प्रतिवद्धता गर्न पनि अर्जेन्टीनाका राष्ट्रपति फेर्नान्डेजले आह्वान गरे ।
दुवै देशका नेताले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप सवै देशहरुलाई सन्तुलित तरिकाले उपलब्ध गराउन उदारता देखाउन पनि खोप उत्पादक देशहरुलाई आग्रह गरे ।
“कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप विश्वव्यापी सार्वजनिक सामान हो, त्यसको प्रयोग सवैले आ आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार गर्न पाउनुपर्छ,” स्पेनका प्रधानमन्त्री सान्चेजले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुका अनुसार अर्जेन्टीनामा अहिलेसम्म ८३ हजार २७२ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी स्पेनमा अहिलेसम्म कुल ८० हजार ३३२ जना को मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । एएनआई
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित] १ घण्टा पहिले
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? १ घण्टा पहिले
सरकारले भन्यो - १८ गतेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको खर्च व्यहोर्दैनौँ १ घण्टा पहिले
यी हुन् कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित १५ देश
दक्षिण सुडानको राजनीतिक अवस्थामा सुधार आएको छ– राष्ट्रसंघ
बाइडेन र किमबीच वार्ता होला ?